खेलकुद Archives - TajaKhabarTV
काठमाडौं । विश्वकप फुटबल छनोट अन्तर्गत गत सेप्टेम्बरमा रद्द भएको ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबीचको खेल पुनः खेलाउन फिफाले निर्देशन दिएको छ । फिफाले छानबिनपछि गत फेब्रुअरीमै यी दुई टोलीबीचको खेल पुनः खेलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाका फुटबल…
काठमाडौं । खेलको अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा फ्रेन्च लिग वान च्याम्पियन बनिसकेको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) बराबरीमा रोकिएको छ । पिएसजीले घरेलु टोली स्टार्सवर्गसँग शनिबार बिहान ३–३ गोलको बराबरी खेलेको हो। घरेलु टोलीका लागि केभिन गेमेइरो र एन्थोनी काचीले गोल…
२०७९, १२ बैशाख सोमबार १९:१६ April 25, 2022 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं, वैशाख १२ : स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोना पराजित भएको छ । आइतबार राति भएको खेलमा बार्सिलोना घरेलु मैदानमा रायो भालेकानोसँग १-० गोल अन्तरले पराजित भएको हो। नोउक्याम्पमा घरेलु टोलीलाई स्तब्ध पार्न रायो भालेकानोका अल्भारो गार्सियाले निर्णायक गोल गरे।…
२०७८, २२ चैत्र मंगलवार ०९:०६ April 5, 2022 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । एएफसी कप छनोट फुटबलको प्ले अफ खेलमा आज मंगलबार नेपालको मछिन्द्र फुटबल क्लबले श्रीलंकाको ब्लु स्टार क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । मछिन्द्र र ब्लु स्टारबीचको खेल साँझ ५ बजे काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा हुनेछ । मछिन्द्र क्लबले पहिलो पटक एएफसी…
नेपालले आज भारतको सामना गर्दै, लजास्पद हारको बदला लिने मौका
२०७८, ७ चैत्र सोमबार १०:११ March 21, 2022 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । भारतमा जारी साफ यू–१८ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज (साेमबार) भारतको सामना गर्दैछ । भारतको जमसेदपुरमा हुने खेल साँझ सवा ७ बजे सुरु हुनेछ । नेपाल साेमबार भारतलाई हराउँदै पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ । तर, उपाधि दाबेदार भारतविरुद्ध…
एमबाप्पेको गोलमा पिएसजीको पुनरागमन जित, मेसि रित्तो हात
२०७८, १५ फाल्गुन आईतवार १०:१७ February 27, 2022 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं : युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पेले दुई गोलसँगै शीर्षस्थानमा रहेको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) ले फ्रेन्च लिग वानमा पुनरागमन जित निकालेको छ। पिएसजीले घरेलु मैदानमा एक गोलले पछि परेको स्थितिमा सेन्ट इटिएनमाथि ३–१ को सहज जित निकालेको हो। पिएसजीको जितमा…
किङ मेसिको सर्मनाक किर्तिमान, बने च्याम्पियन्स लिगमा सबैभन्दा धेरै पेनाल्टी मिस गर्ने खेलाडी
२०७८, ४ फाल्गुन बुधबार ०९:३२ February 16, 2022 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौँ । लियोनेल मेसीले रियल म्याड्रिडविरुद्ध च्याम्पियन्स लिगको खेलमा पेनाल्टी मिस गरेका छन् । खेलको ६२औं मिनेटमा पिएसजीले पाएको पेनाल्टीलाई मेसीले गोल गर्नबाट चुकेका थिए । मेसीले हानेको पेनाल्टी रियल म्याड्रिडका गोल किपर थिबाउट कोर्टोइसले रोकेका थिए । खेलपछि कोर्टोइसले…
मैदानमै मनिष डाँगी ढलेपछि… कस्तो छ अहिले अवस्था ?
२०७८, २९ माघ शनिबार २२:३३ February 12, 2022 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । सहिद स्मारक ए डिभिजन अन्तरगत शनिबारको खेलमा मैदानमा विपक्षी खेलाडीसँग ठाेक्किएर बेहाेस भएका राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्य मनिष डाँगीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको छ । दशरथ रंगशालामा च्यासलविरुद्धको खेलमा विपक्षी खेलाडीसँग ठोक्किन पुगेका डाँकीको अवस्था अहिले स्थिर रहेको…
कतारमा आठ महिनाको उपचारपछि आज स्वदेश फर्किदै नेपाली गोल मेसिन साम्बा
२०७८, २५ माघ मंगलवार १०:३२ February 8, 2022 ताजा खबरखेलकुद
राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ घुँडाको शल्यक्रिया र थप उपचार गराएर आज स्वदेश फर्किदै छिन् । खेलका क्रममा मैदानमै घाइते भएकी साम्बा उपचारका लागि असार १२ गते कतार गएकी थिइन् । उनको असार ३१ गते कतारको दोहामा…
मैत्रीपुर्ण खेलमा हानाहान भएपछि के भन्छन् नेपाली प्रशिक्षक ?
२०७८, १९ माघ बुधबार ०९:०९ February 6, 2022 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले मौरिससविरुद्धको दोस्रो खेलमा पनि जित हात पार्न सफल भएकोमा आफू खुसी भएको बताएका छन् । खेल सकिएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक अल्मुताइरीले आफू आज खेलाडीको प्रदर्शनबाट खुसी भएको बताए । शारीरिक…